Mara iwu | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Emeghari ohuru na elu bụ nke Portal network Blog akụkọ, nke ulo oru a AB Ntanetị Internetntanetị 2008 SL, CIF: B85537785, na adreesị na C / Mirasierra 14-1 2º B, 28410 Manzanares el Real, Spain.
Nwere ike ịkpọtụrụ na:
adreesị ozi-e kwuru
ozi-e kọntaktị (na) blọọgụ (isi) com
ekwentị (+ 34) 902 909 238
ụdị kọntaktị a
Nchedo data nkeonwe
Na-ahụ maka ọgwụgwọ ahụ
Nkọwa kọntaktị nke onye na-elekọta: Miguel Ángel Gaton na kọntaktị email miguel (na) actualityblog (dot) com
Ikike nchedo data gị
Otu ị ga-esi gosi ikike gị: Nwere ike izipu nkwukọrịta ederede na ụlọ ọrụ edebanyere aha nke AB Internet Networks 2008 SL ma ọ bụ na adreesị ozi-e egosiri na isi nke ọkwa iwu a, gụnyere na mbipụta abụọ nke ID gị ma ọ bụ akwụkwọ njirimara ndị ọzọ yiri ya, iji rịọ mmega nke na-esonụ ikike:
Ikike ịrịọ maka ịnweta data nkeonwe: ị nwere ike ịjụ AB Internet Netwọk 2008 SL ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ a na-agwọ data gị.
Ikike ịrịọ maka ndozi (ọ bụrụ na ha ezighi ezi).
Ikike ịrịọ njedebe nke ọgwụgwọ gị, nke ikpe ha ga-edebe naanị site na AB Internet Networks 2008 SL maka mmega ahụ ma ọ bụ ịgbachitere nkwupụta.
Ikike ịjụ ọgwụgwọ: AB Internet Networks 2008 SL ga-akwụsị ịhazi data ahụ n'ụzọ ị gosipụtara, belụsọ maka ihe gbara ọkpụrụkpụ ma ọ bụ mmega ahụ ma ọ bụ ịgbachitere nkwupụta ndị enwere ike ha ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ.
Ikike iji nweta data: ọ bụrụ na ịchọrọ ka ụlọ ọrụ ọzọ rụọ ọrụ data gị, AB Internet Networks 2008 SL ga-eme ka njikwa data gị dị na njikwa ọhụrụ.
Ikike ihichapu data: ma ewezuga iwu dị oke mkpa, a ga-ehichapụ ha mgbe nkwenye gị.
Dị, ụdị na ozi ndị ọzọ gbasara ikike gị: Ibe akwukwọ nke Agencylọ Ọrụ Spanish maka Nchedo Data
Enwere ike ịhapụ nkwenye: Ọ bụrụ na ị nyela ikike maka otu ebumnuche, ị nwere ikike iwepu ya n'oge ọ bụla, na-enweghị imetụta izi ezi nke usoro ọgwụgwọ ahụ dabere na nkwenye ahụ tupu ịwepụ ya.
Esi eme mkpesa na Control Authority: Ọ bụrụ n ’ịtụle na enwere nsogbu na ụzọ AB Internet Netwọk 2008 SL na - ejikwa data gị, ị nwere ike iduzi nkwupụta gị na Onye njikwa nchekwa nke Ntanetị Ntanetị AB Internet 2008 SL (egosiri n’elu) ma ọ bụ njikwa ikike data na kwekọrọ, ịbụ Ọrụ Spanish maka Nchedo Data, nke gosiri na ọ bụ nke Spain.
Ikike echefu gị ma nweta data nkeonwe gị
N'oge niile, ị ga-enwe ikike inyocha, nwetaghachi, denye aha na / ma ọ bụ hichapụ, n'ozuzu ma ọ bụ n'akụkụ, data echekwara na weebụsaịtị. Naanị ị ga-eziga email na kọntaktị@actualidadblog.com ma rịọ ya.
Ikewapụrụ iche: A ga-edebe data ahụ na-ekewapụ na-enweghị oge nhichapụ.
Data nke ndị debanyere aha na ndepụta site na e-mail: Site na oge onye ọrụ debanyere aha ruo mgbe ha wepụrụ aha.
Data nke ndị debanyere aha na ala: Site na oge onye ọrụ debanyere aha ruo mgbe ha wepụrụ aha.
Onye ọrụ nke AB Internet Networks 2008 SL bugoro na ibe na profaịlụ na netwọkụ mmekọrịta: Site na mgbe onye ọrụ nyere nkwenye ha ruo mgbe ha wepụ ya.
Nzuzo na nchekwa data
AB Internet Networks 2008 SL agbadoro iji data, iji kwanyere nzuzo ha na iji ha mee ihe dịka ebumnuche ha si dị, yana irubere ọrụ dịịrị ha idebe ha ma gbanwee usoro niile iji zere mgbanwe, ọnwụ, ọgwụgwọ ma ọ bụ nnweta na-enwetaghị ikike, dịka usoro nke Royal Decree 1720 / 2007 nke Disemba 21, nke kwadoro Iwu maka mmepe nke Iwu Organic 15/1999 nke Disemba 13, na Nchedo nke Data Nkeonwe.
Na-ekwe nkwa na data nkeonwe nke etinyere site n'ụdị bụ eziokwu, na-akwụ ụgwọ ịkọrọ ha mgbanwe ọ bụla. N'otu aka ahụ, ị ​​na-ekwe nkwa na ozi niile enyere na-ekwekọ na ọnọdụ gị, na ọ bụ ihe dị ọhụrụ na eziokwu.
Na mgbakwunye, ị ghaghi idobe data gị oge niile, na-abụ naanị ihe kpatara ezighi ezi ma ọ bụ ụgha nke data enyere yana maka mmebi nke nke a nwere ike ịkpata site na AB Internet Networks 2008 SL dị ka onye nwe weebụsaịtị a, ma ọ bụ ndị ọzọ n'ihi na ojiji nke kwuru.
AB Internet Networks 2008 SL nakweere usoro nchekwa zuru oke iji chọpụta ịdị adị nke nje virus, mwakpo ike dị egwu na injections koodu.
Agbanyeghị, ị ga-amarịrị na usoro nchekwa nke sistemụ kọmputa na arentanetị abụghị nke a pụrụ ịtụkwasị obi kpamkpam na, ya mere, AB Internet Networks 2008 SL enweghị ike ikwenye na enweghị nje ma ọ bụ ihe ndị ọzọ nwere ike ibute mgbanwe na sistemụ kọmputa. (sọftụwia na ngwaike) nke Onye ọrụ ma ọ bụ na akwụkwọ elektrọnik na faịlụ ndị dị n'ime ya.
N'agbanyeghị nke a, ịnwale na-ekwe nkwa nchebe na nzuzo nke data onwe gị, weebụsaịtị nwere usoro nyocha onyunyo na-arụ ọrụ nke na-akọ banyere ọrụ onye ọrụ ọ bụla yana enwere ike imebi nchebe nke data onye ọrụ.
N'ihe banyere ịchọpụta mmebi ọ bụla, AB Internet Networks 2008 SL na-amalite gwa ndị ọrụ n'ime oge kachasị nke 72 awa.
Kedu ozi anyị na-anakọta n'aka ndị ọrụ yana ihe anyị ji ya
Ngwaahịa na ọrụ niile enyere na weebụsaịtị na-ezo aka na ụdị kọntaktị, ụdị nkọwa na ụdị iji mee ndebanye aha onye ọrụ, ndenye aha akwụkwọ akụkọ na / ma ọ bụ iwu ịzụta.
Weebụsaịtị a na-achọkarị nkwenye ndị ọrụ tupu hazie data nkeonwe ha maka ebumnuche ndị egosiri.
I nwere ikike iwepu nkwenye izizi gi n’oge obula.
Ndekọ nke usoro nhazi data
Weebụ na nnabata: Weebụsaịtị ahụ nwere ihe ezoro ezo nke SSL TLS v.1.2 nke na-enye ohere iziga nzipu nke data nkeonwe site n'ụdị kọntaktị ọkọlọtọ, kwadoro na sava ahụ AB Internet Networks 2008 SL butere site na Occentus Networks.
Data anakọtara na weebụ: Nchịkọta data nkeonwe anakọtara ga-edo onwe ya n'okpuru nhazi akpaaka ma tinye ya na faịlụ ndị kwekọrọ na ya nke AB Internet Networks 2008 SL.
Anyị ga-enweta IP gị, nke a ga-eji iji nyochaa mmalite nke ozi ahụ iji nye gị ozi, nchebe megide okwu SPAM na ịchọpụta mmejọ ndị nwere ike ime (dịka ọmụmaatụ: ndị ọzọ na-esote otu ikpe ahụ dee na weebụsaịtị sitere na otu IP), yabụ dị ka data metụtara ISP gị.
N'otu aka ahụ, ị ​​nwere ike ịnye anyị data gị site na email na ụzọ nkwukọrịta ndị ọzọ egosiri na ngalaba ịkpọtụrụ.
Mpempe nzaghachi: Na weebụ enwere ohere na ndị ọrụ na-ahapụ nkọwa na mbipụta saịtị ahụ. Enwere kuki na-echekwa data nke onye ọrụ nyere ka ha wee ghara ịbanyeghachi ha na nleta ọ bụla ọ bụla, na adreesị ozi-e, aha, ebe nrụọrụ weebụ na adreesị IP na-anakọta n'ime. A na-echekwa data ahụ na sava Occentus Networks.
Ndebanye aha onye ọrụ: A gaghị ekwe ka ọ gwụla ma achọrọ ya.
Formdị ịzụtaIji nweta ngwaahịa na ọrụ ndị enyere na ụlọ ahịa anyị n'ịntanetị, onye ọrụ nwere ụdị nzụta dabere na ọnọdụ nkwekọrịta akọwapụtara na amụma anyị ebe a ga-achọ kọntaktị na ịkwụ ụgwọ ozi. A na-echekwa data ahụ na sava Occentus Networks.
Anyị na-anakọta ozi gbasara gị n'oge usoro ndenye ego na ụlọ ahịa anyị. Ozi a nwere ike ịgụnye, ọ bụghị naanị nke a, aha gị, adreesị, email, ekwentị, nkọwa ịkwụ ụgwọ na ndị ọzọ dị mkpa iji hazie iwu gị.
Njikwa nke data a na-enye anyị ohere:
Zitere gị ozi dị mkpa banyere akaụntụ / iwu / ọrụ gị.
Zaghachi arịrịọ gị, mkpesa na arịrịọ maka nkwụghachi ụgwọ.
Hazie ịkwụ ụgwọ ma zere azụmahịa wayo.
Hazie ma jikwaa akaụntụ gị, nye gị ọrụaka na ọrụ ndị ahịa, ma nyochaa njirimara gị.
Na mgbakwunye, anyị nwekwara ike ịnakọta ozi ndị a:
Ọnọdụ na data okporo ụzọ (gụnyere adreesị IP na ihe nchọgharị) ọ bụrụ na ị nye iwu, ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị chọrọ ịtụ ụtụ isi na ụgwọ mbupu dabere na ọnọdụ gị.
Ngwaahịa gara ma lelee ọdịnaya gị ka oge gị na-arụ ọrụ.
Nkwupụta gị na nyocha ngwaahịa ma ọ bụrụ na ịhọrọ ịhapụ ha.
Adreesị Mbupu ọ bụrụ na ị jụọ maka ụgwọ mbufe tupu ịzụrụ ihe mgbe nnọkọ gị na-arụ ọrụ.
Kuki dị mkpa iji debe ọdịnaya nke ụgbọ gị mgbe oge gị na-arụ ọrụ.
Email na paswọọdụ nke akaụntụ gị iji nye gị ohere ịnweta akaụntụ gị, ọ bụrụ na ị nwere otu.
Ọ bụrụ na ị mepụta akaụntụ, anyị na-echekwa aha gị, adreesị na akara ekwentị, iji ha mee ihe na iwu gị n'ọdịnihu.
Mpempe akwụkwọ ndebanye aha: AB Internet Networks 2008 SL na-eji ọrụ nnyefe ozi Sendgrid, Feedburner ma ọ bụ Mailchimp, nke na-echekwa data email gị, aha na nnabata nke ndenye aha. You nwere ike wepu aha na akwụkwọ ozi n'oge ọ bụla site na otu njikọ dị na ala nke mbupu ọ bụla ị nwetara
Email: Onye na-eweta ọrụ email anyị bụ Sendgrid.
Izi ozi ozugbo: AB Internet Networks 2008 SL anaghị enye ọrụ site na izi ozi ozigbo, dị ka WhatsApp, Facebook Messenger ma ọ bụ Nweta.
Ndị na-akwụ ụgwọ ọrụ: Site na weebụ, ị nwere ike ịnweta, site na njikọ, na weebụsaịtị ndị ọzọ, dị ka PayPal o straipu, iji kwụọ ụgwọ maka ọrụ ndị AB Internet Networks 2008 SL nyere. N’oge ọ bụla ndị ọrụ AB Internet Networks 2008 SL nwere ohere ịnweta nkọwa akụ (dịka ọmụmaatụ, nọmba kaadị akwụmụgwọ) ị nyere ndị ọzọ kwuru.
Ọdịnaya sitere na weebụsaịtị ndị ọzọ
Ederede dị na weebụ nwere ike ịgụnye ọdịnaya agbakwunyere (dịka vidiyo, onyonyo, edemede, wdg). Ọdịnaya nke agbakwunyere na weebụsaịtị ndị ọzọ na-akpa àgwà n'otu ụzọ ahụ dị ka à ga-asị na onye ọbịa ahụ eleta weebụsaịtị nke ọzọ.
Ebe nrụọrụ weebụ ndị a nwere ike ịnakọta data gbasara gị, jiri kuki, tinye nsuso ndị ọzọ, ma nyochaa mmekọrịta gị na ọdịnaya agbakwunyere, gụnyere nsuso mmekọrịta gị na ọdịnaya agbakwunyere ma ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ ma ọ bụ jikọọ na weebụsaịtị ahụ.
Ọrụ ndị ọzọ: Servicesfọdụ ọrụ enyere site na weebụsaịtị nwere ike ịnwe ọnọdụ ụfọdụ nwere ndokwa pụrụ iche gbasara nchekwa nke data nkeonwe. Ọ dị mkpa ịgụ na ịnabata ya tupu ịrịọ maka ọrụ a na-ekwu.
Nzube na nkwado ziri ezi: Ebumnuche nke nhazi nke data a ga-abụ naanị iji nye gị ozi ma ọ bụ ọrụ ị chọrọ n'aka anyị.
Ọnụnọ na netwọk: AB Internet Networks 2008 SL nwere profaịlụ na ụfọdụ netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta na ịntanetị.
Nzube na nkwado ziri ezi: Usoro ọgwụgwọ AB Internet Networks 2008 SL ga-arụ na data n'ime nke ọ bụla n'ime netwọkụ ekwuru n'elu ga-abụ, n'ọtụtụ oge, nke netwọkụ mmekọrịta na-enye ohere profaịlụ ụlọ ọrụ. Yabụ, AB Internet Networks 2008 SL nwere ike ịkọwa, mgbe iwu anaghị egbochi ya, ndị na-eso ụzọ ya n'ụzọ ọ bụla na netwọkụ mmekọrịta na-enye ohere maka mmemme ya, ngosi, onyinye, yana ịnye ọrụ ndị ahịa ahaziri iche.
Mmịpụta data: Na agbanyeghị AB Internet Networks 2008 SL ga-ewepụta data sitere na netwọkụ mmekọrịta, belụsọ na nkwenye onye ọrụ doro anya ma nweta ya nke ọma iji mee ya.
Ikike: Mgbe, n'ihi ọdịdị nke netwọkụ mmekọrịta, arụmọrụ dị irè nke ikike nchekwa data nke ikike nke onye na-eso ụzọ ga-agbanwe na profaịlụ nkeonwe nke nke a, AB Internet Networks 2008 SL ga-enyere gị aka ma nye gị ndụmọdụ na njedebe ahụ ruo n'ókè nke ohere ya.
Ndị nhazi na mpụga EU
Email. A na-enye ọrụ email AB 2008ntanetị XNUMX SL site na iji ọrụ Sendgrid.
Netwọk mmekọrịta. AB Internet Networks 2008 SL na-eji netwọkụ mmekọrịta America nke YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Flipboard bụ ndị a na-enyefe data mba ofesi, nke nyocha na nka na ụzụ metụtara njikọ weebụsaịtị ahụ dị na sava ya na AB Internet Networks 2008 SL na-emeso data nke, site na ha, ndị ọrụ, ndị debanyere aha ma ọ bụ ndị na-agagharị agagharị na-enyefe ụlọ ọrụ AB Internet Networks 2008 SL ma ọ bụ kekọrịta ya.
Ndị na-akwụ ụgwọ. Ka i wee nwee ike kwụọ ụgwọ ya PayPal o straipu, AB Internet Networks 2008 SL ga-eziga data dị mkpa nke ndị ahụ na ndị na-arụ ọrụ ịkwụ ụgwọ a maka ịnye arịrịọ ịkwụ ụgwọ kwekọrọ.
A na-echebe ozi gị dịka iwu nzuzo anyị na kuki. Site na ịdenye ndenye aha ma ọ bụ nye ozi ịkwụ ụgwọ gị, ị ghọtara ma nabata iwu nzuzo na kuki anyị.
Ga-enwerịrị ikike ịnweta, mmezi, nhichapụ, mmachi, mbugharị na ichefu data gị.
Site na mgbe ị debanyere aha dị ka onye ọrụ na weebụsaịtị a, AB Internet Networks 2008 SL nwere ohere: Aha njirimara na email, adreesị IP, adreesị nzi ozi, ID / CIF na ozi ịkwụ ụgwọ.
N'ọnọdụ ọ bụla, AB Internet Networks 2008 SL nwere ikike ịgbanwe, n'oge ọ bụla na enweghị ọkwa mbido, mana na-agwa, ngosi na nhazi nke weebụsaịtị dị ka ọkwa iwu a.
Nkwa na ọrụ ndị ọrụ anyị
Accessnweta na / ma ọ bụ jiri weebụsaịtị a mee ka onye ọ bụla mee ya ọnọdụ nke onye ọrụ, ịnakwere, site na oge a, n'ụzọ zuru ezu na enweghị ndoputa, ọkwa iwu a gbasara ụfọdụ ọrụ na ọdịnaya weebụsaịtị.
N'iji weebụsaịtị a, onye ọrụ ahụ na-agba mbọ ka ọ ghara ime omume ọ bụla nke nwere ike imebi ihe oyiyi, ọdịmma na ikike nke AB Internet Networks 2008 SL ma ọ bụ ndị ọzọ ma ọ bụ nke nwere ike imebi, gbanyụọ ma ọ bụ bufee ọnụ ụzọ ahụ ma ọ bụ gbochie , na nke ọ bụla, iji weebụ eme ihe.
Iwu nzuzo anyị na-akọwa otu anyị si anakọta, chekwaa ma ọ bụ jiri ozi anyị na-anakọta site na ọrụ dị iche iche ma ọ bụ ibe dị na saịtị a. Ọ dị mkpa ka ị ghọta ozi anyị na-anakọta na otu anyị si eji ya ebe ọ bụ na ịnweta saịtị a na-egosi nnabata nke iwu nzuzo anyị.
Tonweta ya nwere ike ịgụnye iji kuki. Na kuki Ha bụ obere ozi echekwara na ihe nchọgharị nke onye ọrụ ọ bụla jiri ka ihe nkesa na-echeta ụfọdụ ozi ọ ga - eji na - emecha. Ozi a na - enye gị ohere ịchọpụta dịka onye ọrụ ọ bụla ma nye gị ohere ịchekwa mmasị onwe gị, yana ozi teknụzụ dịka nleta ma ọ bụ ibe ị gara.
Ndị ọrụ ahụ achọghị ịnata kuki ma ọ bụ chọrọ ka agwa tupu ha echekwara na kọmputa gị, ị nwere ike hazi nchọgharị gị maka nzube a.
Imirikiti ihe nchọgharị nke oge a na-ekwe ka njikwa nke kuki n'ụzọ 3 dị iche iche:
na kuki a naghị anabata ha ma ọlị.
Ihe nchọgharị ahụ na-ajụ onye ọrụ ma ọ kwesịrị ịnabata nke ọ bụla kuki.
na kuki na-anabata ya mgbe niile.
Ihe nchọgharị ahụ nwekwara ike ịgụnye ikike ịkọwapụta ihe ka mma kukiekwesịrị ịnakwere na nke na-agaghị. Kpọmkwem, onye ọrụ nwere ike ịnakwere nke ọ bụla n'ime nhọrọ ndị a:
jụ ya kuki nke ụfọdụ ngalaba;
jụ ya kuki site na ndị ọzọ;
kwenye kuki dị ka ndị na-adịghị adịgide adịgide (a na-ewepụ ha mgbe ihe nchọgharị ahụ mechiri);
kwe ka ihe nkesa mepụta kuki maka ngalaba dị iche.
Google, dị ka onye na-enyekọ ndị mmekọ, na-eji kuki iji nye mgbasa ozi na weebụ.
Can nwere ike iwepu ojiji nke kuki DART site na usoro mgbasa ozi Google site na ịnweta ya Oghere nzuzo Google.
Na mgbakwunye, ihe nchọgharị nwekwara ike ikwe ka ndị ọrụ lelee ma hichapụ kuki n'otu n'otu.
I nwere ihe omuma banyere Cookies na: Wikipedia
Saịtị a nwekwara ike ịnabata mgbama weebụ (makwaara dika ahụhụ web). Na mgbama weebụ Ha na-abụkarị obere ihe oyiyi nke otu pikselụ site na otu pikselụ, nke a na-ahụ anya ma ọ bụ nke a na-adịghị ahụ anya, na-etinye n'ime koodu isi mmalite nke ibe weebụ nke saịtị. Na mgbama weebụ jee ozi ma jiri ya mee ihe dika kuki. Na mgbakwunye, na mgbama weebụ A na-ejikarị ha atụ okporo ụzọ nke ndị ọrụ na-aga na ibe weebụ ma nwee ike inweta usoro nke ndị ọrụ nke saịtị.
I nwere ihe omuma banyere mgbama weebụ na: Wikipedia
N'ụfọdụ, anyị na-ekekọrịta ozi gbasara ndị ọbịa na saịtị a na-enweghị aha ma ọ bụ na mkpokọta ya na ndị ọzọ dị ka ndị mgbasa ozi, ndị nkwado ma ọ bụ ndị nyocha maka naanị ebumnuche nke imezi ọrụ anyị. A ga-achịkwa ọrụ ọrụ nhazi ndị a niile dị ka ụkpụrụ iwu si dị, a ga-asọpụrụ ikike gị niile gbasara nchebe data dịka usoro iwu dị ugbu a.
Saịtị a jiri usoro dị iche iche ị nwere ike iji mee njem kuki o mgbama weebụ iji nyochaa ihe na-eme na ibe anyị. Anyị na-eji usoro ndị a iji tụọ okporo ụzọ nke saịtị a. Nwere ike ịhụ ozi ndị ọzọ gbasara amụma nzuzo nke ọ bụla azịza ejiri maka ebumnuche a:
Google (Nchịkọta): Nzuzo Nchịkọta Google
Automattic / Quantcast (JetPack akụkọ): Automattic iwu nzuzo y Quantcast.
Disqus (usoro ịza ajụjụ): Disqus iwu nzuzo
Saịtị a nwekwara ike ịnabata mgbasa ozi nke ya, ndị mmekọ, ma ọ bụ netwọkụ mgbasa ozi. A na-egosipụta mgbasa ozi a site na sava mgbasa ozi ndị jikwa kuki iji gosipụta ọdịnaya ndị mgbasa ozi metụtara ndị ọrụ. Onye ọ bụla n'ime sava mgbasa ozi a nwere iwu nzuzo ya, nke a ga-enyocha na ibe weebụ ya.
na kuki Ha bụ faịlụ emere na ihe nchọgharị onye ọrụ iji dekọọ ọrụ ha na weebụsaịtị ma kwe ka ịnyagharịa mmiri na ahaziri iche.
kuki aha Nzube Ozi ndị ọzọ
__utmz Ọ na-anakọta ozi na-enweghị aha gbasara igodo onye ọrụ site na weebụsaịtị iji mata mmalite nleta na data ndekọ aha ndị ọzọ yiri ya. Anyị anaghị eji kuki ndị a ugbu a. - Ogige Nzuzo Google
-Ntinye ngwa ngwa nwepu aha Google Analytics
Google Adsense, Pịa ugboro abụọ, DART __agha Chịkọta ozi gbasara igodo onye ọrụ iji jee ozi mgbasa ozi - Google Adsense iwu nzuzo
Automattic, Quantcast na Disqus __qta
mmmmmmmmmmmmm Ọ na-anakọta ozi na-enweghị aha gbasara igodo onye ọrụ site na weebụsaịtị iji mata mmalite nleta na data ndekọ aha ndị ọzọ yiri ya. - Quantcast amụma nzuzo
Mgbakwunye __atuvc A na-eji kuki nke __atuvc site na sistemụ mmekọrịta mmekọrịta nke Addthis iji hụ na ndị ọrụ na-ahụ tebụl mmekọrịta mmekọrịta na-agbakwunye na bọtịnụ mmekọrịta nke weebụsaịtị wepụtara nke ọma. - Adthis iwu nzuzo
Iji jiri weebụsaịtị a ọ dịghị mkpa ịwụnye kuki. Onye ọrụ ahụ nwere ike ọ gaghị anabata ha ma ọ bụ hazie ihe nchọgharị ha iji gbochie ha na, ebe o kwesịrị ekwesị, kpochapụ ha.
Enwekwara kuki ndị kwekọrọ na netwọk mmekọrịta nke ebe nrụọrụ weebụ a nwere atụmatụ nke kuki ha.
Kuki Twitter, dika enyere gi iwu nzuzo na iji kuki.
Kuki Facebook, dika enyere gi Iwu kuki
Google+ na Google Maps kuki, dị ka ndokwa na ya na peeji nke banyere ihe ụdị kuki eji
Kuki Pinterest, dika enyere gi aka Iwu nzuzo na iji kuki
Kuki Gravatar, dị ka enyere ya iwu nzuzo nke ụlọ ọrụ Automattic.
Ugbu a, saịtị a na-akwado mgbasa ozi maka:
Google Adsense: Google Adsense iwu nzuzo - Usoro na ọnọdụ -Iwu Mmemme
Nkwado: Iwu nzuzo nzuzo
Google DFP: Google DFP iwu nzuzo.
Ịzụ ahịa: Buysellads iwu nzuzo - Usoro na ọnọdụ
Taboola: Taboola iwu nzuzo.
Iwu ọrụ maka ọdịnaya
Ebe ahụ nwere ederede ederede maka naanị ihe ọmụma ma ọ bụ ihe ọmụma na-enweghị ike igosipụta ọnọdụ nke iwu ma ọ bụ ikike nke iwu na nke na-ezo aka na ọnọdụ niile, yabụ na onye ọrụ enweghị ike itinye ya n'ọrụ na okwu ụfọdụ.
Echiche ndị e gosipụtara na ha apụtaghị n'echiche nke AB Internet Networks 2008 SL.
Enweghị ike ịtụle ọdịnaya nke isiokwu ndị edepụtara na saịtị ahụ, agbanyeghị, dochie anya ndụmọdụ gbasara iwu.
Onye ọrụ ahụ agaghị eme ihe na-adabere na ozi dị na saịtị ahụ na-ebughi ụzọ nweta ndụmọdụ ọkachamara kwekọrọ.
Ikike ikike ọgụgụ isi na nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Site na Ọnọdụ Ndị a, enweghị ikike ikike ọgụgụ isi ma ọ bụ ikike ụlọ ọrụ na Portal ma ọ bụ nke ọ bụla n'ime ihe ndị mejupụtara ya, mmeputakwa, mgbanwe, nkesa, nkwukọrịta ọha na eze, na-eme ka ọha na eze nweta, mwepụ, jiri ya, machibidoro Onye ọrụ ya kpamkpam. izipu ma ọ bụ iji ụdị okike ọ bụla, n'ụzọ ọ bụla ma ọ bụ usoro, nke ọ bụla n'ime ha, belụsọ na ikpe ebe ikike nke iwu kwekọrịtara ma ọ bụ nye ya ikike.
Onye ọrụ ahụ maara ma nabata na ebe nrụọrụ weebụ niile, nke nwere enweghị njirimara zuru oke ederede, onyonyo, atụmatụ, ngwanrọ, ọdịnaya (gụnyere usoro, nhọrọ, ndokwa na ngosi nke otu), ihe ọdịyo na eserese, ụghalaahịa, ikike nwebisiinka na ikike ndị ọzọ edere edebara aha, dabere na nkwekọrịta ụwa nke Spain nọ na ya na ikike ndị ọzọ na ikike nke Spain.
Ọ bụrụ na onye ọrụ ma ọ bụ nke atọ ewere na mmebi iwu ikike ikike ọgụgụ isi ha ziri ezi n'ihi iwebata ụfọdụ ọdịnaya na saịtị ahụ, ha ga-agwa AB Internet Networks 2008 SL nke ọnọdụ a kwuru, na-egosi:
Ihe omuma nke onwe onye nke onye nwere mmasi a nwere ikike ngabiga, ma obu gosiputa onodu ya nke o n’eme ma obu onye ozo n’egosiputa ndi ozo.
Gosiputa ihe ndi echekwara site na ikike ikike ọgụgụ isi na ebe ha di na saiti a, nzere ntozu ikike ikike ọgụgụ isi egosiputara na nkwuputa doro anya nke ndi nwere mmasi na-aru maka eziokwu nke ozi enyere na ngosi a.
Iwu na mkpebi esemokwu
Ọnọdụ ojiji nke saịtị a ugbu a na-achịkwa iwu nke ọ bụla na iwu Spain. Asụsụ ederede na nkọwa nke ọkwa iwu a bụ Spanish. Agaghị etinye akwụkwọ ọkwa iwu a n'otu n'otu maka onye ọrụ ọ bụla mana ọ ga-anọgide na-enweta ya site na onntanetị na weebụ.
Ndị ọrụ nwere ike ido onwe ha n'okpuru sistemụ nke ndị ahịa nke AB Internet Networks 2008 SL ga-abụ akụkụ iji dozie esemokwu ọ bụla ma ọ bụ nkwupụta sitere na ederede a ma ọ bụ site na ọrụ ọ bụla nke AB Internet Networks 2008 SL, belụsọ iji dozie esemokwu ndị ahụ na-akpata mmepe nke ihe omume choro ịbụ onye otu, nke ga - eme ka onye ọrụ ahụ banye na ngalaba kwekọrọ na ụlọ ọrụ mmanya kwesịrị ekwesị.
Ndị ọrụ nwere ọnọdụ nke ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ dị ka ụkpụrụ Spanish si kọwaa ma biri na European Union, ọ bụrụ na ha nwere nsogbu na ịzụrụ ihe n'ịntanetị mere na AB Internet Networks 2008 SL, iji gbalịa iru nkwekọrịta nke ụlọ ikpe nwere ike ịga ka Ihe Mkpebi Mkpebi Ntanetị n'ịntanetị, nke European Union mepụtara ma mepụtara ya na European Commission n'okpuru Iwu (EU) 524/2013.
Ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ abụghị onye na-azụ ma ọ bụ onye ọrụ, yana mgbe enweghị iwu na-akwado ya, ndị ọzọ kwenyere ido onwe ha n'okpuru tolọ ikpe na ikpe nke Madrid isi obodo, ebe nke a bụ ebe mmechi nke nkwekọrịta ahụ, na-ewepụ ihe ọ bụla ikike ọzọ nke nwere ike ịbụ ha.
Ihe anyị na-atụ anya n'aka ndị ọrụ
Thenweta na / ma ọ bụ iji nke a nye onye ọ bụla nke mere ọnọdụ Onye ọrụ, ịnakwere, site n'oge a, n'ụzọ zuru oke na enweghị ndoputa ọ bụla, ọkwa iwu a, yana ọnọdụ ụfọdụ nke, ebe o kwesịrị ekwesị, kwado ya, na mmekọrịta na ụfọdụ ọrụ na ọdịnaya nke ọnụ ụzọ ahụ.
A gwara onye ọrụ ahụ, ma nabata ya, na ịnweta weebụsaịtị a apụtaghị, n'ụzọ ọ bụla, mmalite nke mmekọrịta azụmahịa na AB Internet Networks 2008 SL. N'ụzọ dị otú a, onye ọrụ ahụ kwenyere iji weebụsaịtị, ọrụ ya na ọdịnaya ya n'emebighị iwu dị ugbu a, ezi okwukwe na usoro ọha na eze. Ojiji nke weebụsaịtị maka ebumnuche na-ezighi ezi ma ọ bụ na-emerụ ahụ, ma ọ bụ nke ahụ, n'ụzọ ọ bụla, nwere ike ịkpata mmebi ma ọ bụ gbochie arụmọrụ nke weebụsaịtị ahụ ka amachibidoro. Banyere ọdịnaya nke weebụsaịtị a, amachibidoro ya:
Mmeputakwa ha, nkesa ma ọ bụ mgbanwe ha, n'ozuzu ma ọ bụ na akụkụ ya, belụsọ na ha nwere ikike nke ndị nwe ha ziri ezi.
Mmebi ọ bụla nke ikike nke onye na-eweta ọrụ ma ọ bụ ndị nwe ya ziri ezi.
Ojiji ya maka ebumnuche azụmahịa ma ọ bụ mgbasa ozi.
Peeji nke weebụsaịtị na-enye njikọ nke weebụsaịtị na ọdịnaya nke ndị ọzọ, ndị nrụpụta ma ọ bụ ndị na-eweta ya.
Ebumnuche nke njikọ ndị ahụ bụ iji nye Onye ọrụ ohere nke ịnweta njikọ ahụ yana ịmara ngwaahịa anyị, ọ bụ ezie na AB Internet Networks 2008 SL enweghị ọrụ ọ bụla maka nsonaazụ ndị enwere ike ịnweta onye ọrụ site na ịnweta njikọ ndị ahụ.
Onye ọrụ nke na-ezube ịmepụta ngwa ọrụ ọ bụla sitere na weebụsaịtị ya gaa na ọnụ ụzọ ahụ ga-enwerịrị ikike e dere ede nke AB Internet Networks 2008 SL.
Ntọala nke njikọ a apụtaghị na ịdị adị nke mmekọrịta dị n'etiti AB Internet Networks 2008 SL na onye nwe saịtị ahụ ebe njikọ ahụ guzobere, ma ọ bụ nnabata ma ọ bụ nkwado nke AB Internet Networks 2008 SL nke ọdịnaya ma ọ bụ ọrụ ya .
Ọrụ nke na-emegharị ahụ ma ọ bụ sitere na ndị na-ege ntị na AdWords yiri ka anyị nwee ike ịgakwuru ndị gara leta weebụsaịtị anyị na mbụ wee nyere ha aka mezue usoro ahịa ha.
Dịka onye ọrụ, mgbe ị banyere na weebụsaịtị anyị, anyị ga-etinye kuki na-ebugharị (ọ nwere ike ịbụ site na Google Adwords, Criteo ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ na-enye ntugharị).
Kuki a na-echekwa ozi ndị ọbịa, dịka ngwaahịa ndị ha gara ma ọ bụ ọ bụrụ na ha ahapụla ụgbọ ibu azụmahịa.
Mgbe onye ọbịa bịara na weebụsaịtị anyị, kuki na-agwagharị na-aga n'ihu na ihe nchọgharị ha.
Ọnọdụ ndị ọzọ eji weebụsaịtị a
Onye ọrụ ahụ gbalịsiri ike iji weebụsaịtị na ọrụ ndị a na-enweta site na ya, na-agbaso Iwu, ezigbo omenala na ọkwa iwu a.
N'otu aka ahụ, ọ na-ebido, belụsọ tupu, nkwupụta ma gosipụta ikike nke AB Internet Networks 2008 SL iji jiri ozi dị na weebụsaịtị ahụ, naanị maka ozi gị, na-enweghị ike ịme ahịa azụmahịa ma ọ bụ n'ụzọ na-enweghị isi nke ọdịnaya ọ nwere. ohere.
Saịtị a na-echekwa faịlụ data metụtara ihe e zigara na saịtị a. Nwere ike iji ikike gị nweta, ndozi, ịkagbu ma ọ bụ mmegide site na izipu ozi na adreesị kọntaktị (na) realblog (dot) com.
Saịtị a, ngalaba jikọtara ya na njiri nke ọdịnaya dị na AB Internet Netwọk 2008 SL.
Weebụsaịtị a nwere hyperlinks nke na-eduga na weebụsaịtị ndị ọzọ nke ndị ọzọ na-achịkwa na-abụghị nzukọ anyị. AB Internet Networks 2008 SL anaghị ekwe nkwa ma ọ bụ na ọ bụ ọrụ maka ọdịnaya anakọtara na ibe weebụ ndị a.
Ọ gwụla ma nkwupụta, tupu na ikikere ederede nke AB Internet Networks 2008 SL, mmeputakwa, belụsọ maka iji onwe gị, mgbanwe, na n'ozuzu ụdị ụdị nrigbu ọ bụla, site na usoro ọ bụla, nke ma ọ bụ akụkụ nke ọdịnaya weebụsaịtị a.
A machibidoro iwu ịmezu, na-enweghị nkwenye mbụ nke AB Internet Networks 2008 SL, nhazi ọ bụla ma ọ bụ mgbanwe nke weebụsaịtị a. N'ihi nke a, AB Internet Networks 2008 SL ga-ewere ọrụ ọ bụla ewepụtara, ma ọ bụ nke ahụ nwere ike ị nweta, site na ngbanwe ma ọ bụ mgbanwe nke ndị ọzọ.
Ihe omume ARCO
Can nwere ike igosipụta, gbasara data anakọtara, ikike a ghọtara na Iwu Organic 15/1999, nke nnweta, ndozi ma ọ bụ kagbuo data na mmegide. Maka nke a, a na m agwa gị na ị ga - enwe ike iji ikike ndị a mee ihe site na arịrịọ edere ede wee bịanye aka na ya ị nwere ike izipu, yana foto nke NJ gị ma ọ bụ akwụkwọ njirimara gị, na adreesị nzi ozi nke AB Internet Networks 2008 SL ma ọ bụ site na email, tinye foto nke ID iji: kọntaktị (na) actualityblog (ntụpọ) com. Tupu ụbọchị iri, anyị ga-aza arịrịọ gị iji kwado mmezu nke ikike ị rịọrọ ịme.
Ewepu nke nkwa na ibu oru
AB Internet Networks 2008 SL anaghị enye nkwa ọ bụla ma ọ bụ na ọ bụ ọrụ, n'ọnọdụ ọ bụla, maka mmebi nke ụdị ọ bụla nke nwere ike kpatara:
Enweghi nnweta, mmezi na arụmọrụ dị irè nke weebụsaịtị ma ọ bụ ọrụ ya na ọdịnaya;
Ọnụnọ nke nje virus, mmemme na-emerụ ahụ ma ọ bụ nke na-emerụ ahụ n'ime ọdịnaya;
Ejighị iwu a, akpachapụghị anya, wayo ma ọ bụ jiri ya mee ihe Iwu Omume a;
Enweghị iwu, ogo, ntụkwasị obi, uru na nnweta nke ọrụ ndị ọzọ enyere ma mee ka ndị ọrụ webụsaịtị ahụ.
Ntanetị Ntanetị Ntanetị AB SL 2008 anaghị akwụ ụgwọ n'ọnọdụ ọ bụla maka mmebi nke nwere ike ibilite site na iji weebụsaịtị a eme ihe na-akwadoghị ma ọ bụ na-ezighi ezi.
Nkọwapụta European maka esemokwu esemokwu n'ịntanetị
Ndị European Commission na-enye usoro ikpo okwu esemokwu ntanetị dị na njikọ ndị a: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ndị na-eri ihe ga-enwe ike ịnye nkwupụta ha site na ikpo okwu mkpebi esemokwu n'ịntanetị
Iwu na ikike
Na mkpokọta, mmekọrịta dị n'etiti AB Internet Networks 2008 SL na ndị ọrụ nke ọrụ telematic ya, nke dị na weebụsaịtị a, dị n'okpuru iwu na ikike Spanish.
Anyị ga-enweta mgbe niile: kọntaktị anyị
Ọ bụrụ na onye ọrụ ọ bụla nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ọnọdụ iwu ndị a ma ọ bụ okwu ọ bụla gbasara ọnụ ụzọ ahụ, biko gaa kpọtụrụ (at) actualityblog (dot) com.
Nnabata na nkwenye
Onye ọrụ ahụ kwupụtara na a gwara ya banyere ọnọdụ dị na nchedo data nkeonwe, ịnakwere na nkwenye na ọgwụgwọ ya site na AB Internet Networks 2008 SL, n'ụzọ na ebumnuche ndị egosiri na iwu nzuzo a.
N'usoro iwu dị ugbu a, AB Internet Networks 2008 SL anaghị arụ ọrụ SPAM, yabụ ọ naghị eziga ozi ịntanetị azụmahịa nke onye ọrụ arịọbeghị ma ọ bụ nye ikike na mbụ. N'ihi ya, n'ụdị ọ bụla dị na weebụ, Onye ọrụ nwere ohere ịnye nkwenye doro anya ha ịnata Akwụkwọ Akụkọ / akwụkwọ akụkọ anyị, n'agbanyeghị ozi azụmahịa achọrọ ka a kpọọ.